Mkpụrụ Semalt Na-ekpughe Twitter Atụmatụ Maka Gị Iji Supercharge A Business
Site na Krismas na Black Friday nyebaways na Facebook na Twitter ka ha na-etinye ndị ọkachamara na-egwu na Tumblr na Instagram, e nwere usoro dị iche iche na usoro maka inwe ihe ịga nke ọma n'ịntanetị dika onye ọchụnta ego. Ọ bụrụ na ị jiri Facebook ma chọọ ịnwa Twitter, lee, anyị ejirila ụfọdụ ndụmọdụ na-akpali akpali ịmalite.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịmepụta profaịlụ na-achọpụta ọkachamara na Twitter ma mechaa mezuo ya. Inwe mgbasa ozi mgbasa ozi adịghị mfe, yabụ na ị ga-arụ ọrụ siri ike. Ekwuru na ị ga-eme atụmatụ ihe ndị kachasị mma ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na Twitter na ị maghị ihe niile banyere ya. Na mbido, ọ ga - ewepụta oge ị ga - enwe ọtụtụ ndị mmadụ - it consulting services in Portland.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Semalt , na - ekwu na iji Twitter dị mma ma dị mfe karịa iji Instagram na Facebook. Naanị ị ga-agba ndị mmadụ ume ịgbaso gị, a pụkwara ime nke a ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ihe ndị kwesịrị ekwesị ma na-eme ka ndị mmadụ site n'inweta ọdịnaya ọdịnaya na ihe ndị dị mma.
Na-arụ ọrụ na Algorithm nke Twitter
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ amaghị ihe Twitter ghaggọrọnyere ma ha amaghị na ịrụ ọrụ na ya nwere ike ime ka ọnụọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ ha. Ndị ahịa ahịa ahịa na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na-achọpụta na ịrụ ọrụ na algorithm nke Twitter dị mkpa maka ụdị na ndị nwe ụlọ ọrụ..I kwesiri ile anya na ya ma kwesiri imata ihe ndi mmadu di na ala na - aga n'ihu.
Jiri vidio Twitter
Iji vidio vidiyo nwere ike inye gị nza nke ndị na-eso ụzọ, mbak, na mmasị n'oge ọ bụla. Ahịa mgbasa ozi ahịa vidiyo bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma isi gbasawanye azụmahịa gị, nke a egosikwara nke a n'ọtụtụ isiokwu. E wezụga Twitter, ị nwere ike ịhọrọ Snapchat, YouTube, na vidiyo Instagram iji mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ụmụazụ gị. Nlekọta nke profaịlụ mgbasa ozi gị kwesịrị ịbụ ihe dị oke mma ma na-arụ ọrụ.
Cheta ugboro ugboro
Ego ole ka ị na-eketa kwa ụbọchị? Echiche bụ na ị kwesịrị iji Twitter kwa ụbọchị ma mee ka ndị na-eso ụzọ gị nwee otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Zipụ tweets nkeji iri ọ bụla ga-eme ka ụwa mara na ị dị n'ịntanetị ma dị njikere ịmasị ndị fan gị. Nke a ga - eme ka ọnụọgụgụ nke ndị na - eso ụzọ gị, ndị ọrụ gị ga - enwetakwu oge na tweet gị.
Gbalịa ihe dị iche na nke ọhụrụ
Ọ dị mkpa na ị na-anwale ihe dị iche, nke ọhụrụ ma na-emetụta karịa ihe ndị ọzọ na-eme. Emeela ụbọchị ndị mmadụ na-ekerịta otu ihe ugboro ugboro. Ụbọchị ndị a, ndị mmadụ na-adọta mmasị na profaịlụ nke nwere foto profaịlụ na ọdịnaya dị ebube. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nwalee ihe dị iche iche na nnwale na ọdịnaya dị ebube iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na Twitter. Usoro a nwere ike iyi mgbagwoju anya, mana ọ bụ naanị ụzọ iji hụ na ị dị na ịntanetị. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta visibiliti n'ịntanetị, ị ghaghị ịkwado ndị mmadụ na tweet dị iche iche magburu onwe ya yana isiokwu. Ya mere, olee echiche gị banyere ya? Echefukwala ịkekọrịta echiche dị na igbe igbe dị n'okpuru.